जनवरी 25, 2017 जनवरी 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक0Comments चाणक्य नीति, नुहाउनु, सम्भोग
चाणक्य नीति अनुसार सम्भोगपछि किन जरुरी छ नुहाउनु ? चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनले आफ्नो कुटनीतिको बलले एक सामान्य बालक चन्द्रगुप्तलाई विशाल भारतको सम्राट बनाइदिए । उनका भनाईहरु आज पनि सर्वत्र चर्चा हुने गर्दछ ।
जीव विज्ञान अनुसार सम्भोग आनुवंशिक लक्षणहरुको संयोजन र मिश्रणको एक प्रक्रिया हो, जुन जीवको भाले वा पोथी हुनुले निर्धारित गर्दछ । सम्भोग क्रिया थाल्नु अघि नहाउने, दाँत माझ्ने एवम् उपयुक्त लुगा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । चाणक्यका अनुसार स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो । यसकै कारणले स्वास्थ्यको सम्बन्धमा कयौं प्रकारका नियम बनेका छन् । राम्रो खानपान, रहनसहन र बानी व्यहोराले गहिरो प्रभाव पार्छ । कयौं रोग त केवल नुहाएर नै खत्तम हुन्छ । चाणक्य नीति अनुसार नुहाउनुपर्ने कारणहरु यस प्रकार छन ।त्यस्तै चाणक्य नीति अनुसार सम्भोगपछि नुहाउनुपर्ने कारणहरु यस प्रकार छन ।
१. हिन्दू धर्ममा शारीरिक र आत्मिक स्वच्छताका लागि मानिसले सम्भोगपछि पनि नुहाउनुपर्छ ।
२. सम्भोगपछि कुनै पनि धार्मिक क्रियामा शामिल हुनुलाई राम्रो मानिदैन् । यसकारण यो निकै जरुरी छ कि सम्भोगपछि स्नान गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य कुनै कार्यमा समावेश हुन सकिन्छ ।
३. चाणक्य नीति अनुसार सम्भोगपछि स्नान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यस्तो गर्नुभन्दा पहिला घरको सरसफाइ पनि गर्नुहुँदैन् । किनकि यस्तो गर्नाले तपाई आफ्नो घरलाई अशुद्ध हुन्छ ।
← जीवनमा सधैं गोप्य राख्नुपर्ने ४ कुराहरु
खुट्टाको औलाको आकारबाट थाहा पाउनुस् मानिसको स्वभाव →
डिसेम्बर 13, 2016 नोभेम्बर 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
डिसेम्बर 17, 2016 डिसेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1